တပ်ထဲက အခြေအနေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » တပ်ထဲက အခြေအနေ
ကျနော်တို့ တပ်ဘေးက ဆေးတပ်၊ ပင်ယာဉ်သိုလှောင်ရေးတပ်၊ ထောက်ပံ့နဲ့ ပို့ ဆောင်ရေးတပ်၊ ဂျီအီးတပ်တွေလို ကျနော်တို့ တပ်က မချမ်းသာပါဘူး။ ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျနော်တို့ ကို အမေ့က ပြောတယ်။ အမေက ဘာပြောလဲဆိုတော့ နင့်အဖေတပ်က ခဲယမ်းကို မီးဖုတ်ပြီး စားလို့ မှ မရတာလို့ ပြောတယ်။ သူများတွေက ချမ်းသာမှာပေ့ါတဲ့။ ဟုတ်သားပဲ….ကျည်ဆံတွေကိုရောင်းစားလို့ မှ မရတာ။ မင်္ဂလာဒုံဈေးထဲမှာ တပ်ထဲက ဆန်ဆီဆားနဲ့ ယူနီဖောင်းအဟောင်းတွေကိုတော့ ရောင်းစားတာတွေ့ တယ်။ လက်ပစ်ဗုံးတွေ၊ ကျည်ဆံတွေကိုတော့ မတွေ့ မိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ မွဲတာလို့ အမေက ခဏခဏပြောတယ်။ ပြီးတော့ နင့်အဖေ က ဟိုအရည်တွေပဲသောက်နေတာဆိုတော့ နင်တို့ ဒီလိုပဲနေပေါ့လို့ ဆိုပြီး ဆေးလိပ်တိုကို ဆောင့်ဆောင့်ထိုင်ဖွားပြီး ခဏခဏပြောတယ်။
မိတ်ဆွေ ချင်းတိုင်းရင်းသားတယောက်ပြောတာ.. သတိရမိတယ်..
မြန်မာ့တပ်မတော်ကြီးတခုလုံး.. ပင်လယ်ထဲမောင်းချလို့မှာ မရတာနော် ..တဲ့..။
မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ စစ်သည်အင်အား ၃သိန်းကျော်တော့ရှိတယ်တဲ့..။ (၄သိန်းများလားတောင်မသိ..)
တပ်မိသားစုနဲ့.. ဆွေမျိုးအဆက်အနွယ်တွေပေါင်းရင်… ၁၀သန်းအသာလေးရှိပါတယ်..။
စစ်တပ်ဆိုတာ.. တိုင်းပြည်တခုမှာ.. မရှိလို့မရတာလည်းမဟုတ်…။
မြန်မာပြည်လို အနေအထားမှာ.. စစ်တပ်ဟာ.. အင်မတန်ကို ပရိုဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ဖို့လိုတာပါ..။
ပရိုဖက်ရှင်နယ်စစ်သားတွေဟာ.. နိုင်ငံရေးထဲ.. ၀င်မရှုပ်ပါဘူး.။ Civilအုပ်ချုပ်ရေး.. အရပ်ဖက်ကိစ္စတွေ ၀င်မပါပါဘူး..
အင်မတန်ကျစ်လစ်တဲ့.. စည်းကမ်းရှိတဲ့.. တပ်ဝင်းထဲ.. အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်.. ဘားတိုက်နဲ့.. ရာရှင်နဲ့..အဆောင်နဲ့..အိမ်နဲ့.. ဘ၀အာမခံချက်အပြည့်နဲ့..နေတာပါ…။
( ပြောရရင်. ကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံး.ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့.. . ယူအက်စ်စစ်တပ်ကို..မြို့ထဲ.. သေနတ်ကြီးတွေကိုင်ရက်သားနဲ့.. တခါမှ(တခါမှ) မတွေ့ဖူးပါ)
မြန်မာစစ်သားတွေ.. နောင်မကြာတဲ့နှစ်တွေမှာ.. ကုလသမဂ္ဂမှာ.. တလ ဒေါ်လာထောင်ချီနဲ့.. အင်မတန်ကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်စွမ်းရည်..။ လက်နက်တွေနဲ့. ငြိမ်းချမ်းရေး ကာကွယ်သူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။
မပြောမရှိပါနဲ့.. ။ မြန်မာစ်တပ် ပရိုဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာမဲ့.. ဖြစ်နိုင်တဲ့.. လမ်းစကို မြင်နေရပါပြီ..။
သဂျီး ပြောတာ ကိုထောက်ခံပါတယ်။
ထောက်ပို့ တပ် ၀န်ထမ်း ထော နေတာ ကို သဘော မကျဆုံးပဲ။
( သူများ ကြီးပွားတာ မနာလို ဖြစ် စိတ်နဲ့ လုံးဝ မဟုတ်ရ ပါ။ )
တပ်ကြပ် တောင် တော်တော် ထော တာ ဗျာ။ အဲဒီ တပ်ကြပ်ရဲ့ အိမ်၊ ထောက်ပို့ က ဗိုလ်တယောက်ရဲ့ အိမ် မျက်စိ အောက်တင် ဖြတ် သွား လာ တွေ့ နေ ရတော့ မြွေမကြောက် ကင်းမကြောက် ထင်းခွေ စားနေရတဲ့၊ ထင်းခွေ နေကြ တဲ့ စစ်သား မယားတွေ အတွက်ရော ချို့ချို့ တဲ့တဲ့ နဲ့ နေထိုင် စားသောက်နေရတဲ့ စစ်သားမိသားစုတွေ ကို ပို သနားတယ်။
စဉ်းစား ကြည့် လေ။
ထောက်ပို့ တပ် ထော တယ် ဆို တာ စစ်သား အချင်းချင်း တွေ ရဲ့ စားနပ် ရိပ်ခါ နဲ့ ရပိုင်ခွင့် တွေ ကို ခေါင်းပုံ ဖြတ်ပြီး ချမ်းသာနေတာ ဆို တော့……..။
တပ်ထဲမှာကွာခြားတာတော့မှန်ပါတယ်။သကြီးပြောသလို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်army ဖြစ်လာရင်အကောင်းဆုံးပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခြေလျှင်တပ်ကတော့ သနားစရာအကောင်းဆုံးပါ။
တစ်ချို့ကိစ္စတွေက မှန်မမှန်မသိပါ၊သို့သော် တပ်သားတွေဆင်းရဲတာ၊စီနီယာဗိုလ်မှုးတစ်ချို့က။ ဗိုလ်ကလေးတွေအပေါ်ခေါင်းပုံဖြတ်တာတွေရှိနေစဲပါ၊ တစ်ချို့ဝက်မွေးဘို့ဝက်ဘိုးတော့ချပေး တယ်၊ ၀က်ခြံ၊အစာဘိုးမလာက်လို့ အောက်ကဗိုလ်ကြီးတွေစိုက်လုပ်ရတယ်၊ပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတောင်းရခက်လို့မတောင်းရဲပဲရှော်လိုက်ရတာမျိုးတွေရှိနေတယ်၊စစ်သားတွေဟာလည်းပြည်သူတွေပါပဲ၊အိမ်မှာရေခဲသေတ္တာတော့ရှိပြီး အဲသည်အထဲစိုစိုပြေပြေမထည့်နိုင် ဟန်ပြစစ်ဗိုလ်တွေအများကြီးပါဗျာ၊ သင်တန်းတက်ပြီးစရိတ်ပြတ်လို့ မိဘထံ စရိတ် ပြန်တောင်းရတဲ့အဖြစ်တွေမနဲပါဘူး ၊ပြည်သူ့တပ်မတော် မို့ပြည်သူနဲ့ထပ် တူဒုက္ခခံနေရပြီး၊ပြည်သူနဲ့တစ်သားထဲကျလာရင်ပြည်သူအများ ကတပ်မတော်သားတွေ ဒုက္ခကိုမျှဝေခံစားကြမှာပါ၊အရေးဆိုပေးကြမှာမလွဲပါဘူး။
ဒုက္ခသည်ချင်းရိုင်းပင်းတဲ့သတ္တိရှိဘို့လိုပါတယ်၊ဒါဆိုပူးပေါင်းပြီးအားလုံးကောင်းအောင်လုပ်လို့ရပြီပဲ၊သည် ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ဖိအားမရှိပဲကိုယ်ကျိုက်ရာပါတီမဲပေးခွင့်ရှိတယ်လို့တော့ အဲ ကြားရတယ်၊စစ်တပ် ဟာပြည်သူကြားမှပေါက်ဖွါးလာတာမို့၊ပြည်သူသာလျှင်အမိ၊အဘပါလို့ခံယူချက်ပြောင်းပြီး၊ပြည်သူ့ဒုက္ခကို
စစ်အကြောင်းတော့နားမလည်ဘူး ဒါပေမယ့်လာဖတ်သွားတယ်နော် စစ်သားဘ၀လည်းမလွယ်သလို ပြည်သူ တွေလည်း ဆင်းရဲနေတာပါဘဲ အားလုံးကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အေးချမ်းတဲ့ဘ၀လေးရကျပါစေ
စစ်အကြောင်းတော့နားမလည်ဘူး ဒါပေမယ့်လာဖတ်သွားတယ်နော် စစ်သားဘ၀လည်းမလွယ်သလို ပြည်သူ တွေလည်း ဆင်းရဲနေတာပါဘဲ အားလုံးကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အေးချမ်းတဲ့ဘ၀လေးရကျပါစေချမ်းသာကျပါစေနော်
ကိုဘုန်းကျော်ရေ …. ။ ဆန်းတော့ ဆန်းနေပါပြီ .. .တပ်နဲ့ပဲ ဆိုင်မလား … နယ်မြေနဲ့ပဲ ဆိုင်မလား ။
ကျွန်မသိရသလောက် … ရာထူးမြင့်လာလျှင် မြင့်လာသလို အကျိုးခံစားခွင့်တွေရှိပါတယ် … ။
တိုက်ခန်း (တပ်ပြင်ပမှာနော်) ရတာမျိုး ကားရတာမျိုး … အရင်က ဆယ်လူလာခေတ်က ဆယ်လူလာတွေရတာမျိုး …. တစ်ခုပြီး တစ်ခု ရပါတယ် … ။ ဗိုလ်မှုကြီး အဆင့်လောက်ဆိုလျှင်တော့ … အတော်မိုက်နေပြီ .. ။